Wararkii ugu dambeeyay Weerarkii lagu qaaday Hoteelka Naas-Hablood | shumis.net
Home » galmada » Wararkii ugu dambeeyay Weerarkii lagu qaaday Hoteelka Naas-Hablood
Wararkii ugu dambeeyay Weerarkii lagu qaaday Hoteelka Naas-Hablood
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Weerar Ismiidaamin ahaa oo khasaaro kala duwan geystay, kaasi oo Shalay lagu qaaday Hoteelka Naasa-Hablood 1 oo ku yaalla Nawaaxiga Isgooyska KM4 ee Magaalada Muqdisho.
Wararkaasi oo mas’uuliyadiisu ay sheegteen Xarakada Al Shabaab ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 15 Ruux waxaana sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 30 kale kuwaasi oo la dhigay Isbitaalada Magaalada Muqdisho.
Qaraxaasi Ismiidaaminta ahaa ayaa sidoo kale waxuu sameeyay kaalin Shidaal oo ku taalla ka soo horjeedka Hoteelka la qarxiyay, waxaana sidoo kale meesha ku burburay Gadiid dhowr ahaa oo ku baakinaa afaafka hore ee Hoteelka Naasa-Hablood.
Xoogaga amaanka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo goobta soo gaaray ayaa saacado kadib ku guuleystay dib u qabashada Hoteelka oo ay ku jireen Dagaal yahano hubeysnaa.
Dhinaca kale, Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay Weerarkaasi lagu qaaday Hoteelka.
Waxuu ku tilmaamay Weerarkaasi mid waxuushnimo, isagoona xusay in wax laga xumaado ay tahay in la dhibaateeyo Dad Soonaaa.
Ugu dambeyn, Xarakada Al Shabaab ayaa ku hanjabtay in ay kordhin doonto weerarada xoogan oo Dagaal yahanadoodu ay ka geysanayaan Magaalada Muqdisho.
Title: Wararkii ugu dambeeyay Weerarkii lagu qaaday Hoteelka Naas-Hablood